भ्रष्टाचारको अन्त्य : विकासको बाटो – Chitwan Post
भ्रष्टाचारको अन्त्य : विकासको बाटो
भ्रष्टाचारजस्तो निर्घिणी कुकर्मका कारण हाम्रो देशले मानवता, नैतिकता र नेपालीपनलाई गुमाइरहनु परेको दुःखदायी पीडामा देश बिरामी छ । बुद्ध, जनक, सीताजस्ता शालीन आदर्शवाणीको इतिहासलाई लालची स्वभावले गाँजेको छ । अर्काको धन र देशको सम्पत्ति दुरुपयोग गरी स्वार्थ लिप्सामा लहसिने कुबुद्धितिर उच्च ओहदाका मानिस निर्लज्ज लहसिनु असभ्यताको बर्बरता नै हो । नेपालको संविधान २०७२ को भाग २१ को धारा २३८ ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई व्यवस्था गरी कानुनी दायरालाई कायम राखेको छ । सन् २००३ देखि हरेक साल डिसेम्बर ९ का दिन संयुक्त राष्ट्रसंघले अन्तर्राष्ट्रिय भ्रष्टाचारविरुद्धको दिवस मनाउँदै गएको इतिहाससँग पसिनाको कमाइमा बाँच्न सिकाउने हाम्रो पूर्वीय ज्ञानको सेतु गाँसिन्छ । लालसा, नैतिकता, गैरकानुनी धन्दाबाट कमाउनेको लोभलाई झापड हान्दै “हातका मैला सुनका थैला के गर्नु धनले…” भन्ने भावलाई हाम्रा महाकविले त्यसै भनेका होइनन् नै ।
वर्तमान राजनीतिमा जनतालाई व्यवस्थासँग होइन, पार्टीका नेताहरूको शैलीसँगको असन्तुष्टि छ । परिवर्तनमा जटिलता भएकैले प्रजातन्त्रपछि पञ्चायती व्यवस्थाले खुट्टो घुमायो । आज पनि परिवर्तनमा भौतिक व्यवस्थापन र मनोवैज्ञानिक जटिलताले प्रभाव पारिरहेकै देखिन्छ । परिवर्तन नभएका होइनन् तर स–साना समस्यासँग बेरोजगारी, अभाव र अप्ठ्यारापन छन् । धेरै मात्रामा स्थानीय तहमा देखिएका र माथिल्ला तहमा नदेखिएका साना–ठूला भ्रष्टाचारले परिवर्तनको आभास हुने अवस्था भएन । राम्रा–राम्रा विकास भएका पनि छन् तर जनताले अनुभव नगरी भनेका भरमा बोध गर्ने अवस्था पनि छैन । तर, भौतिक विकासलाई मात्र देशको नेतृत्व र जनताले विकास भनिरहेको देखिन्छ । चेतना, शिक्षा, नवीनतम् प्रविधिका ज्ञान, जनताका सामाजिकीकरणका कलालाई विकास भनिएन । तर, हाम्रो समाजमा विकासको प्राचीन परम्परामा जसरी नै राजनीतिगत स्वार्थ र खेमाबन्दी भने हाबी नै छ । मुलुकले उत्पादनयोग्य र मुलुकमै सम्भव हुने दाल, चामल, मरमसलादेखि ठूला मूल्यका सामग्रीलाई भारतबाट आयात गर्नु परेका विडम्बना छन् । स्थानीय जग्गाजमिन बाँझो छ ।
४० प्रतिशत युवाशक्ति भएको हाम्रो मुलुकबाट हजारौँ युवा परदेशलाई समृद्ध बनाउन जानैपर्ने बाध्यता छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलगायतका विभिन्न सोचहरू आए पनि त्यो झारो टार्ने शैलीमात्र हो । देशमा युवाशक्तिलाई सन्तुष्टि दिने अवसर नै भएनन् । दिगो विकासको मुहान फुटाउन मुलकमा सबै समाजवादउन्मुख समृद्ध नेपाल भनिएको छ तर वास्तवमा समाजवादको व्यावहारिकतामा हेक्का राखिएन । सत्तामा माफियाराजको निर्मूल हुँदै भएन । चाकडीबाज अझ मौलाएकै छ तब नराम्रा कुरा धेरै देखिए । भएका राम्रा कुरा पनि दबिए । वास्तवमा देश जोजसको नेतृत्वमा होस्, जनताले निजत्वको भाव बोध गर्ने वातावरण पाउनुपर्छ । आफ्नै पार्टी, आफ्ना खेमापन्थीलाई काखी च्याप्ने शैलीले राजनीति कलुषित बन्छ ।
विकासका सपनामा सधैँ टालटुले प्रवृत्तिले प्रहार गरिरहन्छ । हिउँदमा फटाफट विकास निर्माण, बाटाघाटाका काम भएका छैनन् । वर्षायाममा झरीबादलले हिउँदको तुलनामा बढी खर्च बढ्छ नै । आ.व.को अन्तमा बजेट सक्ने चटारो र हतारोसँगै भ्रष्टाचारको खहरे उर्लिन्छ । अझ एकातिर सत्तापक्षीले प्रतिपक्षसँगको जुहारी, प्रदेशले संघको कुरोमा अटेर गर्ने, प्रतिपक्षी नेताहरू जनताको भीडतिर लहसिन्छन् । भीडमा मिसिएर आफ्नो प्रभाव छाँट्ने शैलीमा केही पार्टीका नेतृत्व भुलेकै छन् । वास्तविक विषयमा कारणसहित अडान लिन पनि जान्नुपर्छ तर सम्भावित समस्यालाई योजना निर्माणपूर्व नै परिकल्पना गर्ने वातावरण तय हुनुपर्छ । वास्तविक काम गर्न नजान्ने शैली अहिलेको समस्या हो । असारे विकासको लहर, स–साना समस्या पनि पार्टी, आफन्तवाद, कतातिर अप्ठेरो पर्ला कि भन्ने सोचले गलतलाई गलत र सहीलाई सही भन्ने भाव जागृत हुन सकेन ।
मुलुकको ठूलो समस्या गरिबी, बेथिति र भ्रष्टाचार हो भन्ने सबैलाई थाहा पनि छ । अझै पनि हाम्रो देशको नेतृत्व धेरै हदमा संसद भवनभित्र भत्ता र सत्ताका लोभमा छन् । समय, रुम र सम्पत्तिको दुरुपयोग हुनु पनि त भ्रष्टाचार नै हो । प्रधानमन्त्रीले ‘म भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न पनि दिन्न’ भनिरहँदा भ्रष्टाचारको रूप आर्थिकमात्र नहुन सक्छ । आफू ले नगरे आसपासदेखि नै शुद्धीकरण गरेर उदाहरणीय बन्दै सबैमा सूचना प्रवाह गरिनुले सत्यतामा विश्वसनीयता बढ्छ । भ्रष्टाचारको अर्थ त आर्थिक, प्रशासनिक, नैतिक आचरणको समग्र शुद्धीकृत स्वरूप हो । तर, हाम्रा धेरै नेतृत्वमा भोगवादी सोच देखिन्छ । सुविधा भोगको भोक देखिन्छ तर भिजन र मिसनमा रहेर ठोस योजनामा हिँड्ने अठोट देखिन्न । योजना बन्छन् तर समयमा सकिँदैन । फलतः त्यहाँ भ्रष्टाचारको जालो बुनिन्छ । संघीय मुलुकले साँचो र चाहेको परिवर्तनलाई विकासका कार्यलाई गरेर देखाउने शैलीबाट पनि त प्रतिस्पर्धा गर्न पनि जान्नुपर्छ । जनताको वास्तविकतासम्म ओर्लेर, बाध्यतासम्मलाई नियालेर समाजवादउन्मुख परिवर्तनलाई जनस्तरसम्म प्रवाहित गराउन सक्दैन । फलतः जनतामा नयाँपन र खुसीको सोचेजस्तो आभास हुन सकेन ।
मुलुकमा सुशासनको अनुभूति नभएसम्म अर्को प्रतिक्रान्ति उब्जने भयसँग पनि निर्भय बन्न सकिन्न । सङ्क्रमणकालीन सङ्कटले राम्रोसँग पार नपाएका वेदना मुलुकमा छन् । यसर्थ नेपाल र नेपालीको भाग्य र भविष्यलाई सुनिश्चित तुल्याउन सरकारले अब ठूला अभीष्ट राखेर पूरा भएन भन्नुभन्दा स–साना योजना बनाएर पूरा गर्दै अघि बढे राम्रो हुन्छ । गाउँमा धारा, पानी, सहकारी, बजार, मल के चाहिन्छ देओस् । भएका स्कुल, स्वास्थ्यचौकीलाई सुधारगरी कमसेकम सुविधासम्पन्न र प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजाओस् । तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन विकासका योजनामा अब तत्कालीन आवश्यकतामा सरकारले लक्ष्य बनाएर समय सीमासहितको योजना बनाओस् ।
राम्रो काम गर्नेले चुनावका बेला हात जोड्दै भोटको भीख माग्नै पर्दैन । त्यस्तो वातावरण सिर्जना गर्ने कुरामा प्रतिस्पर्धा गरे देश बन्न समय नै के लाग्ला र ! युवा छन्, विकासका सम्भाव्यता छ अनि व्यवस्थाका लागि सरकार सक्षम छ त अवरोध केले गरायो ? स्थानीय समस्यालाई सुल्झाउन गाउँ र सम्बन्धित स्थानसम्म नपुग्ने जनप्रतिनिधिले आफू उपरकालाई सलाम गर्ने होडबाजी छ हिजोआज । हरेक सांसद् र मन्त्रीहरूले आफ्नो क्षेत्र र प्रदेशमा बसेर काम गर्ने अनि प्रतिमहिना वा दुई महिनामा अनिवार्य प्रगति विवरण सुनाउनुपर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गराउन सकिएला । स्थानीय सरकारका कार्यविधिलाई मूल्याङ्कन गरिँदैन । बरू राम्रा व्यक्तिलाई पाखा र चाप्लुसीवालालाई काखा गरिरहँदा देश केन्द्रमै नैतिक भ्रष्टाचारमा बिरामी छ कि !
संघीय सरकारले प्रत्येक प्रदेशका पारदर्शी विकासमा आवश्यकताका आधारमा संयोजन र सहयोग गर्दै आवश्यक टेवा मिलाउने हो भने मुलुक बन्न समय लाग्दैन । यहाँ त स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले सांसद्को मुख ताक्दा, सांसदले संघका ठूलाबडालाई रिझाउँदा हिजोकै शैलीमा भनसुने आफन्तवादे प्रवृत्ति हाबी छ । स्थानीय जनताले सांसदको नाकमुखै देख्न गाह्रो । गाउँका जनप्रतिनिधिहरू यसो गाउँका कामकार्यमा माला र टीका लाएर पट्यारलाग्दो भाषण छाँट्ने शैलीको विकासमा प्रतिस्पर्धा गर्छन् । आफूलाई गाउँमा कुनै कार्यक्रममा सामेल गराएर आसन ग्रहण नगराएको झोँकमा फन्केका नेताहरू मनोवैज्ञानिक आवेग र प्रतिशोधमा हुन्छन् । प्रतिपक्षीको विरोध गर्दै विकासका कनीकुथी विशाल योजनाका गफ मिसाउने शैली पुरानै हो । तर, नयाँपनमा त पहिला विकास अनि सम्मानमा जनताकै साथ मिल्नुपर्छ । यसो भनिरहँदा सबै नेतृत्वमा मिसन, भिजन छैन भन्ने पनि होइन । धेरै परिवर्तन भएका छन् तर जनताले महसुस गर्ने अवस्था छैन । काम गर्दै जाने हो भने नाम र सम्मान मात्र होइन जनताले माया आफैँ गर्छन् । अब जनता पहिलाको तुलनामा बाठा पनि त भइसके ।
सरकारले सामाजिक सुरक्षाका विषयमा मूलतः गाँस, बास र कपासको जोहो हुने गरी कमसेकम एक घरमा एक सरकारी जागिर हुने गरी रोजगारको अवसर दिलाओस् । रोजगारले विकासका कार्यमा अत्याधुनिकता देओस् । आधुनिक विकासका आफ्नै मोडल तयार होऊन् जुन महŒवाकाङ्क्षा राखिएका योजनाभन्दा कार्यमूलक होऊन् । प्रायोगिक होऊन् । नत्र, कल्पना केवल खरानीको डोरी बन्छ । तर, विकासका नाममा संस्कृति र नेपाली समाजको कुनै पनि हदमा विखण्डन हुनु हुँदैन । सुन्दर प्रकृतिलाई केवल दोहन गरिँदै छ भने उत्तम विकल्प पनि बेलैमा खोजिनुपर्छ । आवश्यकताका आधारमा प्रयोग र पुनः संरक्षणको बाटो स्पष्ट हुनुपर्छ । वनका वृक्ष र वन्यजन्तुको संरक्षण हुनुपर्छ । कंक्रिट सहरीकरणको शैलीले भोलिको खेतीयोग्य जमिन चितवनमा जसरी, खेतीका लागि उत्तम रहेको तलैया माटो भएको काठमाडौँ सहरमा जसरी कुरूप र हेर्न लायक नरहेको बनिदिन्छ । त्यो देशको लागि दीर्घकालिक क्षतिको कारक बनिदिन्छ । हरेक मानिसका अनिवार्य आवश्यकतामा सरकारले आयव्ययको दिशाचित्र बनाउँदा स्थानीय विकासमा जाँगर बढाओस् । हिउँदे विकासको थिति बसाउन विकासको एजेन्डा तय गराओस् । केन्द्रीय सरकारले प्रदेशबीच कानुनी दायरामा निगरानी राख्ने हो भने अवसर र सुझावका साथमा सचेतना पस्कोस् । यसर्थ मुलुकको विकासका लागि वास्तवमा ठोस योजना र दीर्घकालिक दिगो विकासको पारदर्शी कार्यकलाप आवश्यक हुन्छ । नीति र निगरानीका लागि पनि स्पष्ट र निःस्वार्थ नेतृत्व सीप चाहिन्छ नै ।
प्रतिक्रियाको लागि :
शान्ति हरेक दिन…हरेक क्षण …
सिन्धुपाल्चोकमा बस दुर्घटना: १५ जनाको मृत्यु, १९ घाइते